Nuru Studio • Body Rub sy NuRu Massage
Julia dia tovovavy ambony sy avara-pianarana manome fanorana vatana amin'ny vatana any Manhattan. Manantena hatrany ny hahazo traikefa vaovao sy hahazo namana izy. Miaraka amin'ny toetra mahafinaritra sy mahaliana ary fientanam-po be dia be, fotoana laniana miaraka aminy dia dia majika feno fahasambarana madio.
Julia dia voajanahary 34C. 5'7 izy, fa lava kokoa amin'ny stilettos izay matetika anaovany. Manana vatana miolakolaka izy, tongony manify ary vodiny boribory mahafinaritra. Tanna izy ary manana endrika vatana hourglass manaitra.
Angamba afaka matoky azy amin'ny hareza ianao ary mahazo "rihana ambany" tsy manam-paharoa? Na inona na inona safidinao, hahafinaritra izany! Raha mila fanazavana fanampiny, azafady, antsoy.
Ny fikasihan'i Julia ara-nofo, ny aromatherapy ary bodyrub New York dia ny zavatra rehetra ilainao mahatsapa fahasambarana. Tena mahay amin'ny kanto tantra izy ka mandry fotsiny ary mahatsapa ny onjan'ny fahafinaretana madio haka ny vatanao sy ny sainao.
Alatsinainy: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Talata: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Alarobia: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Alakamisy: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Zoma: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Asabotsy: 10:30 maraina - 3:00 maraina
Alahady: 10:30 maraina - 3:00 maraina